Myanmar Defence Weapons: ဒေသတွင်းနိုင်ငံများ၏ စစ်ဝတ်စုံများ
Seatownz February 22, 2012 at 3:36 AM
Love those pixilated camo ACUs of SG military. http://www.strikehold.net/2009/04/12/singapore-armed-forces-pixilated-camo-combat-uniform/
sanaythar February 23, 2012 at 2:55 AM
ဒူးကာများ၊ တံတောင်ဆစ်ကာများ ၀တ်ဆင်နိုင်စေဖို့ အစကတည်းက စိတ်ကူးယဉ်ကြည့်မိပါတယ်။ တပ်မတော်သားတွေ စစ်မြေပြင်မှာတိုက်စွမ်းရည်တက်လာမှာအမှန်ပါ။ ခုန်လို့ကောင်း၊ ၀ပ်လို့ကောင်း၊ မှောက်လို့ကောင်း၊ သူတို့ရဲရဲတင်းတင်းတိုက်ပွဲဝင်နိုင်တာပေါ့။
မခက်ဘူးလို့ထင်ပါတယ်။ ဖိုက်ဘာ(သို့)ရာဘာ၊ Mould လုပ်ရတာလည်းမခက်ဖူးလို့ထင်ပါတယ်။ ဒီကစက်မှုလုပ်ငန်းတွေကို တင်ဒါစနစ်နဲ့အပ်နှံ လုပ်ကိုင်ခိုင်းရင်ဘယ်လိုလည်းခင်ဗျာ။
sanaythar February 23, 2012 at 3:04 AM
ဦးထုပ်ကတော့ အာဆီယံလေ့ကျင့်မှုသွားတဲ့ ဦးထုပ်ကို သဘောကျပါတယ်။
မြန်မာရာသီဥတု၊ ကုန်ကျစရိတ်၊ ဆောင်းနေကျအရာ၊ နွေ၊ မိုး၊ ဆောင်း ရာသီဥတု ကိုက်ညီတယ်လို့ထင်တယ်။ မြို့တွင်းစစ်မြေပြင်များအတွက် Bullet Proof တစ်ကယ်ဖြစ်သော Helmet ကိုသဘောကျပါတယ်။ သူက အခြားသော Optional Accessories များတပ်ဆင်နိုင်လို့ပါ (နောင်တတ်နိုင်လာတဲ့အခါကျရင် တစ်မျိုးပြောင်းစရာ မလိုတော့ဘူးပေါ့ခင်ဗျာ)
အ၀တ်အစားကတော့ အေးပြီး အကြမ်းခံလောက်အောင်၊ အသား အနာတရမဖြစ်လောက်အောင် ထူဖို့လိုပါတယ်။ အရောင်ကတော့ Type of Battlefield အလိုက်အမျိုးမျိုးရှိသင့်ပါတယ်။ တပ်မတော်တွင်တာဝန်ယူနေကြသော အကိုကြီးများအားလုံး ၀ိုင်းဝန်းတိုက်တွန်း ဆောင်ရွက်ပေးကြဖို့ ပြောလိုပါတယ်ခင်ဗျာ။
DR. NAING'S DIARY February 27, 2012 at 6:36 PM
MM February 27, 2012 at 6:40 PM
ကောင်းတယ်ဗျ ဒီနှစ်အတွင်းအမြန်ဖြစ်နိုင်ရင် ကောင်းမယ်ဗျ... ဒီနေ့တပ်မတော်နေ့မှာ စစ်ရေးပြပွဲရှိမလားဗျ ကြားမိကြသေးလား...
ARKAR'S DIARY February 27, 2012 at 6:46 PM
ရှိတယ်ဗျ၊ အခု နေပြည်တော်ကိုတောင် ရောက်နေကြပြီ။ ဒီနှစ်တော့ နည်းနည်းပိုပြီး ထူးခြားမယ်လို့ ကြားတာဘဲဗျာ။
sanaythar February 27, 2012 at 7:46 PM
၀မ်းသာပါတယ်ခင်ဗျာ။ ကို DR. Naing ပြောပုံဆိုရင် ပျောက်ကြားစစ်ဝတ်စုံဖြစ်မှာပေါ့။ ကောင်းတယ်။ စစ်ရေးပြပွဲသတင်းလည်းကျေးဇူး။
saiwaihintun February 28, 2012 at 12:32 AM
Warmly welcome for the news and thanks for those put in more effort to change all our armed force uniform. Really appreciate it!
gwa to April 9, 2012 at 7:38 AM